Mazino eGoridhe / Grills - Popular Jewelry
Iyo iconic grill yakabuda muma1980 panguva yehudyu-hudyu makore achangotanga. Iwo magadzirirwo akareruka ezuro apfuura akachinja mukushomeka sezvo indasitiri yezvishongo yakagadzirisa zvishoma nezvishoma nzira dzayo. Kwemakore makumi matatu, Popular Jewelry anga ari kumberi kwekushongedza kwetsika dhizaini; grills aive asiri iwo. Kubva pachirongo chimwe chete kusvika pakazara goridhe nemadhaimani— Popular Jewelry akazviita zvese.
Yedu Yetsika Grills- izwi rinobva kwatiri.
Seyambiro: idzi hadzisi idzo dzakapusa, dzakajairika, saizi-inokodzera-ese marudzi e grills- ivo vanoitirwa kurongedza; tsika yakatarisana nemuridzi wayo. Vanozokwana chete mutengi ivo vakagadzirirwa. Wakamboona kupara mhosva kuratidza episode kwavanoyedza kuenzanisa mazino maficha emuviri nemazino zvinyorwa zvevanhu vasipo? Zvakanaka, zvinozobuda iri nzira yakaedzwa uye yechokwadi; chimiro chemazino chemunhu chakasarudzika seDNA yake. Muzita rekuwedzera uye mhando, tinoita kuti grills edu anyanye uye agare kuti titsauranise iwo kubva kune edu emakwikwi. Kana iwe uchikweretesa kunyemwerera kunopenya kune shamwari dzako dzakapunzika dhongi, mikana ndeyekuti vanozopedzisira vaine kushushikana kwakaipa pachinzvimbo- kubva pamutemo wechiremba wemazino ivo vagadzira mazino avakacheka vachiedza kumanikidza grill yako. Kufanana neese emhando yepamusoro akagadzirwa akavezwa zvishongo, echinyakare magrill anoitwa neakanyanya kutarisa kune zvakadzama uye hunyanzvi. Grill yedu inotanga pamadhora zana nemakumi mashanu (imwe chete sirivheri sirivheri) uye kukwira kubva ipapo. Tora mazino ako aite nemazvo. Pano. Pasina munhu wepakati. Prudly yakagadzirwa muNew York.
Inodiwa ruzivo & zvinhu zvekufunga kana uchiisa odha yako nesu.
1) Kumusoro kana Akadzika mazino? (Pamusoro / Bhodhoro)
2) Vangani uye ndeapi emazino? (Incisors, Canines, Molars)
3) Ndeupi mhando yesimbi inokosha? (Sterling Siliva, Goridhe (10K, 14K, 18K), Platinamu)
4) Ndeupi rudzi rwevara? (Rose, Ichena, Yero)
5) Ndeupi mhando yekupedzisa? (Yakapukutwa, Matte, nezvimwewo)
6) Dhizaini yekufungidzira? (Yakazara / Vhura kumeso / Gapu / nezvimwe.)
7) Unoda kuisa mabwe emabwe pavari here?
Ndeupi mhando & ruvara?
8) Kana uchikwanisa, ndokumbirawo utore dhirowa / sketch / pikicha / mufananidzo kuitira kutibatsira kuti tinzwisise kuti ndeupi rudzi rwekugadzira urikuenda.
9) Iwe unoronga nezvekuita chero basa remazino riitwe pameno ako munguva yepamberi (izvi zvinogona kukanganisa nzira yavanokodzera gare gare). Isu tinokurudzira chero chekumirira / chisingaperi chemazino maitiro kuti apedziswe usati waisa grill Order pamwe nesu kuti uve nechokwadi chenguva yakareba yakakodzera grillz yako.
Green Diamond Tsika Grill
Solid Pazasi Masere-Mazino Laser Akatemerwa Grill
Imwe-Kapu Vhura Hwindo
Wepamusoro Uzere-Matanhatu Mazino Plain Grills (Yero Goridhe / Chena Goridhe)
Yakazara-Set Solid Plain Grill
Iced-Kunze Gap Huru w / Mafuremu (White Diamond; Pavé Stonesetting)
Iced-Out Caps (Chena Dhayamondi; Pavé Stonesetting)
Tsika Engravings (Kanji mavara e "Dhimoni")
Tsika Engravings (Cannabis Leaf)
Tsika Engravings (Playboy Bunny)
Tsika Dhaimani Zvigadzirwa (Muchinjika)
Dhaimondi Dutu / Vhura Chimiro Row
Akazara-mafashama (prong matombo; akasimuka goridhe nesipireti sapphires)
Iced-Out Yakavhurika mafiramu
Idhaimani-Cheka Vhura mafiramu
Dhaimondi Dutu (mairi-Toni)
Yakasarudzika Yakapukutwa Fangs
Drip (pasi mutsara chete)
Dhaimondi Dutu (sirivha)
Iced-Out Bar (chiteshi chakavezwa; 2 mitsara)